UZIJONGA NJANI IITWEETS EZIKHUSELWEYO 2020? - IBHLOG
Uzijonga njani iiTweets eziKhuselweyo 2020?
I-Twitter yenye yezona zidumileyo kwaye zisetyenziswayo kwimithombo yeendaba kwezentlalo emhlabeni phantse wonke umntu. Inike iqonga labasebenzisi ukuba babelane ngayo nantoni na abayifunayo. Ivumela abasebenzisi ukuba babelane ngolwazi kunye nabanye. Kwaye okona kubaluleke kakhulu malunga neetweets. Phantse wonke umsebenzisi owenza iakhawunti ye-Twitter ufuna ukwazi ngakumbi ngezi tweets. Kananjalo malunga nabucala. Siza kukuxelela ukuba ungayenza njani jonga ii-tweets ezikhuselweyo kwi-Twitter.
Uzijonga njani iiTweets eziKhuselweyo?
Ewe, i-Twitter inokuba sisixhobo esihle sokugcina nabantu abanomdla, ukufunda ulwazi olutsha, kunye nokuhlala unolwazi malunga neendlela zangoku kunye nokuhleba. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kuyanqweneleka ukungalandeli iprofayile yomntu, nangona ufuna ukufunda uhlaziyo lwabo. Ke, usebenzisa ii-apps zomntu wesithathu unokujonga ii-tweets zakho. Kwaye, oku kunokuba zizizathu zobumfihlo okanye kuba awufuni ukwenza iprofayili yomntu ukuba ibonakale inefuthe lokuba nenani eliphezulu labalandeli. Kananjalo, abasebenzisi be-Twitter banokukhetha ukwenza ii-tweets zabo zaziwe esidlangalaleni ukuze nabani na azibone okanye azikhusele ukuze abalandeli abavunyiweyo kuphela bakwazi ukuzijonga. Kodwa, kukho abanye abasebenzisi be-Twitter abakhusela ii-tweets zabo kuphela kubafowunelwa abasondeleyo beshishini abanokujonga iifayile ezinokuthi ziqulathe ulwazi olunobuchule okanye olunentengiso. Ezi ndlela ziya kukunceda ujonge ii-tweets ezikhuselweyo kwi-Twitter. Kwaye, Akukho ndlela yokufikelela kwi-tweets ezikhuselweyo zomsebenzisi we-Twitter ngaphandle kwemvume yakhe, ke ukuba ufuna ukujonga ii-tweets ezikhuselweyo kuya kufuneka ulandele umsebenzisi kwaye umlinde ukuba avume isicelo sakho sokulandela. Kuphela emva kokuvunywa, ii-tweets ezikhuselweyo zomsebenzisi ziya kubonisa njengee-tweets eziqhelekileyo onokuzijonga kwi-Twitter feed kwiphepha lakho lasekhaya okanye kwelinye iphepha lasekhaya le-Twitter lomsebenzisi. Ke, ukhe wazibuza ukuba yintoni umsebenzisi we-Twitter anokuyenza kuthulekile xa umva wakho ujikile? Kwaye ukhe wacinga ukuba kungakho iindlela zokufumanisa, ngaphandle kokophula umthetho, nangaphandle kokuphula iMigaqo yeNkonzo ye-Twitter? Ewe, ukuba kunjalo, unokufuna ukujonga eli nqaku libalulekileyo. Ngale ndlela, unokubona ii-tweets zabucala ngaphandle kokulandela. Lilonke ukuba uyakhathala malunga nemfihlo yakho, kwaye ufuna ukwazi ukuba usesichengeni kangakanani ekubekeni iliso ngokufihlakeleyo kumalungu oluntu aqhelekileyo, oku kuya kuba yinto ebalulekileyo yokufunda. Kwaye wonke umntu kufuneka ayazi indlela amanyala ngayo amanyathelo abucala e-Twitter. Kwaye, ityhila iinkcukacha zeakhawunti ebalulekileyo umntu ayinikiweyo ayilandeleyo, kodwa mhlawumbi akasalandeli, kwaye usenokungafuni ukuba wazi ngayo. Kwaye obu buchule bunokusetyenziswa ngumntu ongathembi iqabane lakhe kwaye afune ukwazi ukuba bebelandela iiakhawunti kwi-sly, emva koko ungabalandeli ukunqanda ukubanjwa. Kodwa ke, kungenjalo, inokusetyenziswa ngumqeshi ofuna ukulala nomqeshwa onokulandela kwaye emva koko angalandeli iiakhawunti xa efuna omnye umsebenzi. Kwaye ngaphambi kokuba ndiqalise, mandikhathaze ukuba oku akukuboneleli ngolunye uluhlu olupheleleyo lwazo zonke iiakhawunti umsebenzisi azinikileyo. Kwakhona, iyakhetha, kwaye intle kwaye iphoswe. Uyazi ukuba kwezinye iimeko, obu buchule bunokubonisa okuninzi malunga nokusetyenziswa komntu nge-Twitter kunokuba befuna tyhila.so nantsi indlela esebenza ngayo. Ubeka iakhawunti entsha yeTwitter. Kodwa kufuneka ibe yintsha kraca. Ngale ndlela unokubona ii-tweets zabucala ngaphandle kokulandela. Kwaye ukuba uyisebenzisile iakhawunti nangayiphi na indlela ngaphambili, oku ngekhe kusebenze. Kodwa unokukhusela iakhawunti ye-Twitter kuphela ngumfanekiso wakho weprofayile, i-bio, kunye noluhlu lweakhawunti elandelwayo kunye neyabalandeli ebonakalayo kuye nakubani na ngaphandle kwabalandeli bakho. I-Twitter eyakhelwe-ngaphakathi kwi-retweet mechanism ibeka unqakrazo olunye ekunene phantsi komyalezo ngamnye ukwenzela ukuba ababhalisile basasaze omnye umsebenzisi umyalezo kubaphulaphuli ngokubanzi. Kodwa ukuba ungumlandeli ogunyazisiweyo weakhawunti ekhuselweyo, awunakho ukusebenzisa eli nqaku ukuphinda ubhale i-tweets zeakhawunti ekhuselweyo; enyanisweni, ezi khonkco aziveli ngokulula. Kwaye i-icon yokutshixa ebonakala emva kwegama lomsebenzisi kwiphepha lakhe leprofayili kunye ne-tweet nganye athumela imiqondiso yeakhawunti yakhe ekhuselekileyo. Ubumfihlo be-DM abenzi umxholo wabo ukuba ube ngasese ukuba babandakanya ulwazi okanye izinto ezifikeleleke ngenye indlela. Kwaye ukubona iitweets zeakhawunti ekhuselweyo, kufuneka ucele imvume kwaye ufumane imvume yokuba ngomnye wabalandeli beakhawunti. Kodwa awuyi kufumana i-tweets ezikhuselweyo ngokukhangela kwiWebhu. Kwaye ukuba iakhawunti ekhuselweyo iphendula kwi-tweet isuka okanye ikhankanye umntu ongekho kuluhlu lwabalandeli, impendulo okanye ukukhankanywa ayisoze yenzeka kumgca wexesha lelinye iqela. Imiyalezo ethe ngqo yenza ukuba nawuphi na umrhumi we-Twitter athumele i-tweet yabucala komnye wabalandeli bakhe. Ke, ungabona ii-tweets ezikhuselweyo kwi-Twitter. Xa ubhala kwaye ujonga le miyalezo kwindawo eyahlukileyo ye-Twitter-client interface, efikelelekayo kwi-timeline esekwe kwiWebhu okanye iphepha lasekhaya ngokusebenzisa i icon yeemvulophu kwimenyu yebar. Emva kwexesha i-Twitter izamile ngokufutshane ukwenza ababhalisile kwi-DM nayiphi na iakhawunti abayilandelayo, nokuba elinye iqela alilandeli, kodwa kwinyanga enye kamva, inkonzo ibuyise umva lo mgaqo-nkqubo.
Ababhalisi be-Twitter abazibandakanyi nenkonzo ye-microblogging yehlabathi yokuthumela imiyalezo yabucala. Kwaye bahlala bethumela ezabo iingcinga kunye nokujonga ukuze bafumane ukubonakala okubanzi kakhulu kunye nokuvezwa ngaphandle kwemeko ezimbini. Zii-tweets ezikhuselweyo ze-Twitter kunye nemiyalezo ethe ngqo evela kwiindlela ezimbini zabucala zonxibelelwano ngaphakathi kwindawo yemidiya yoluntu enikezelwe ekuveni nasekuveni. Kwaye ezi ndidi zikhethekileyo zeeakhawunti zababhalisi kunye nomsebenzi wokuthumela imiyalezo ngaphakathi okanye ecaleni kwemisebenzi yesiqhelo ye-Twitter.
Ngale ndlela, unokujonga imfihlo kunye iiTweets ezikhuselweyo Kwi-Twitter ngaphandle kokulandela abasebenzisi kwi-Twitter. Ungasebenzisa iindlela ezahlukeneyo kunye neendlela namacebo okujonga ii-tweets ezikhuselweyo. Zininzi izixhobo zomntu wesithathu ezikhoyo ezinokukunceda ukusombulula le ngxaki njengoko le software iyilelwe ukuba ingene kwiakhawunti okanye ufumane ukufikelela kwiiakhawunti zabucala kwaye emva koko ikuvumele ujonge ii-tweets zabucala ngokungathi ujonge iakhawunti yoluntu kwi-Twitter.
Ivenkile yomzekelo wesiseko sedatha
khuphela ividiyo ye-youtube python
ubutshintsha njani ubungakanani befonti kuGoogle chrome
eyona ilayibrari yetshathi efanelekileyo
uyakha njani i-portal yewebhu